Rakitra marika: unboxing
Dom » Entina notsongaina miaraka amin'ny "unboxing"
Mi Air Purifier 3 - unboxing
miaro mpanadio rivotra 3, unboxing
Ao anatin'ity famerenana farany ity dia nampanantena anao izahay fa hanisy takelaka Mi Air Purifier 3. Inona ny endriky ny fonosana ary inona no mety ho hitanao ao? Zahao amin'ny unboxing izahay! Tianao ny lahatsoratrao? Sahala aminay ...
Fametahana ny Zamel Supla SRW-01 sy SRW-02
Ankehitriny dia manana unboxing hafa ho anao izahay! Tamin'ity indray mitoraka ity, ny hatsaram-panahin'i Zamel dia ho afaka hanaisotra vokatra roa vaovao isika: SRW-01 sy SRW-02. Azo zatra mifehy ny jiro ny iray, ary ny jamba hafa! Manasa anao izahay hijery ...
Fantaro ny ho avy - Unboxing Mi Mix Alpha sy ny sarimihetsika fanampiny
mi mixing alpha, unboxing, xiaomi
Nisy sarimihetsika vaovao mifandraika amin'i Mi Mix Alpha dia niseho tao amin'ny tambajotra, izay navoakan'i Xiaomi tao amin'ny Weibo. Asehon'ilay horonantsary ny fivoaran'ny finday sy tahaka ny telefaona, tena mampiavaka azy ihany koa ny video. Ary ho an'ireo mbola tsy namaky ...